Kubonakala ngathi siza kuba nePensile 3 ye-Apple ngo-Epreli 20 | Ndisuka mac
Kwinyanga ezayo ka-Epreli 20 a Umnyhadala omtsha ovela eApple Park, apho inkampani yaseMelika izakubonisa khona izixhobo ezitsha. Ekuphela kwento esemthethweni ngayo yonke le nto ngumhla kuba izixhobo eziza kuboniswa zisengamahemuhemu. Kucingelwa ukuba iPad entsha Pro iya kwenza ukungena kwayo kodwa ayizukuza yodwa. Kubonakala ngathi uqikelelo lwethu lunokuzaliseka kwaye siza kubona ipensile entsha ye-Apple. Isithathu sesizukulwana sakhe.
Ngokwendawo evuzayo kwi-Weibo, U-Apple ulungiselela ukumilisela ipensile ye-Apple yesizukulwane sesithathu, ngokucacileyo njengenxalenye yomsitho we-Epreli weNtwasahlobo.. Kuya kufuneka sinike ingqalelo kwinto ephawulwe yiakhawunti kule nethiwekhi, kuba ngamanye amaxesha baye baphumelela. Sele sinolwazi malunga nepensile ye-Apple yesizukulwana sesithathu. Khumbula ukuba sithethile isixhobo esitsha kodwa eqaqambileyo ngombala kwaye hayi matte.
Okwangoku kwintengiso sineemodeli ezimbini zePensile. Isizukulwana sokuqala endikholelwa ukuba ubuncinci siza kuphelelwa lixesha xa kuziswa isithathu. Ipensile ye-Apple 2 iya kuba yeywezinye izixhobo ngaphandle kwepro kunye Lo uza kuza nepensile entsha ye-Apple "phantsi kwengalo."
Iinkcukacha zinqabile, kodwa isizukulwane sesithathu Ipensile ye-Apple inokubandakanya ezinye izinzwa ezintsha ezisebenza kuphela kwimiboniso kwi-IP Pro 2021 ezayo, ezinokuthi zivumele amanqaku amatsha okanye ukuchaneka okukhulu kwepeni yedijithali. Enye yeempawu ezintsha eziphambili ezilindelwe kwi-Pro ye-iPad ye-12,9-intshi ezayo yi Umboniso we-miniLED, ebonelela ngamanqanaba aphezulu okuqaqamba nokungafani.
Ithebhulethi entsha inokuza ngezibuko leThunderbolt. Nangona inkqubo yangoku yokutshaja induction iyamangalisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » Kubonakala ngathi siza kuba nePensile 3 nge-Epreli 20